Tag: mazano emushandisi | Martech Zone
Tag: mazano emushandisi
Chitatu, September 18, 2013 Chitatu, September 18, 2013 Douglas Karr
Ivo vanhu veMushandisiVoice vanga vakabatikana kuvaka uye kuyedza maturusi matsva ekukubatsira iwe kubatanidza vashandisi vako, kuve nani, mhinduro inotungamirwa nedata, uye nekupa rutsigiro rwuri nani kupfuura nakare kose. Kwemwedzi mishoma yapfuura vanga vachiedza mamwe emidziyo iyi mukati mevatengi vavo 'UserVoice admin consoles, kusanganisira yavo itsva Kugutsikana uye SmartVote majeti, pamwe nefomu nyowani, yakapusa yekubatana. Nhasi, ivo vari kuita maturusi matsva kuwanikwa kune wese munhu! Sangana neiyo nyowani,
Mibvunzo mishanu pane Zvemukati Optimization Maitiro
Muvhuro, July 5, 2010 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Kunze nekuenderera mberi ini ndinoona kuti mamwe masocial media pundits anoudza makambani hazvina basa kuti vanotora chikamu munzanga venhau, chete ivo vanoita chaizvo. Vamwe vanopokana kuvandudzwa kwesocial media zano vasati vatanga. Pane mibvunzo mishanu yaunofanirwa kuzvibvunza iwe paunenge uchigadzira zvemukati pawebhu: Zvemukati zvinofanirwa kuiswa kupi? - chikuva icho iwe chauri kuisa zvirimo chinofanirwa kuve chakagadziridzwa kune chakanangwa vateereri iwe